Lalao Roblox mampatahotra tsara indrindra - Desambra 2020 (Lisitra) - Lalao
Roblox dia sehatra iray goavambe manerantany izay misy Gamers an-tapitrisany mifandray isan'andro hanehoana ny fahaizany milalao ao anaty tontolo 3-midadasika sy novokarin'ny mpampiasa. Ny mpilalao iray dia afaka milalao lalao manaitra saina izay novolavolain'ny mpampiasa manerantany ary afaka manangana ny lalaony ihany koa izy ary mizara izany amin'ny hafa hilalao. Samy tsy misy fetra na ny karazana filalaovana ao amin'ny Roblox na ny hevitry ny mpamorona.
Roblox dia natomboka tamin'ny 2007 ary mandray mpilalao 64 tapitrisa isam-bolana amin'izao fotoana izao ary mitazona kaonty 178 tapitrisa amin'ity sehatra ity. Ireo mpampiasa dia afaka misintona azy ho fampiharana amin'ny Android sy IOS ary milalao ny lalao amin'ny takelaka, PC, Xbox One na Amazon fitaovana.
Anisan'ireo an-jatony lalao ao amin'ny Roblox manerana ny amboara iray, ny lalao Roblox mampatahotra dia voaporofo ho karazana malaza indrindra, izay afaka manosika ny adrenalinanao ho any amin'ny ambaratonga manaraka. Ka raha mitady ny lalao mampatahotra Roblox tsara indrindra ianao amin'ny fotoana rehetra dia eo amin'ny toerana mety ianao. Ity ny lisitry ny lalao 10 mampatahotra indrindra sy ny sasany amin'ireo endri-javatra ireo.
Mitady amin'ny Mahazoa Robux Maimaim-poana amin'ny taona 2020? araho ny anay Roblox Guides .
Lisitry ny lalao mampatahotra Roblox tsara indrindra:
1. Fahanginana maty
Io no lalao mampihetsi-po farany indrindra ho an'ireo mpilalao mankafy hetsika, korontana ary herisetra. Ny lalao dia manolotra fanamby sy toe-javatra marobe, ary miatrika fanoherana tsy ampoizina ianao. Miorina amin'ny tantaran'ny horonantsary amerikanina tamin'ny horonantsary 2007, izay mitondra ny anarana hoe Dead Silence.
Misy fomba lalao maromaro ao anatin'ity lohateny ity. Afaka milalao miaraka amin'ny namanao ianao ary mankafy tsara ny lalao. Raha mila tantara mampatahotra ianao dia izao no toerana mety aminao. Misy ihany koa ny fomba tafavoaka velona izay manome anao loharanon-karena barebones. Ny mpilalao dia mila mijanona velona mandritra ny fotoana lava indrindra.
Izy io dia manana maody Perspective First-Person (FPP) ahafahan'ny mpilalao milalao mpilalao 4 hafa.
Misy scares 15 mitsambikina (4 lehibe, 11 tsy ampy taona) amin'ny lalao miaraka amin'ny naoty 4.0 an'ny scorer.
2. Ny trano
Lalao Roblox adventurous mampatahotra izaitsizy io. Mila mandositra trano iray ianao sy ny namanao. Mahatsiravina izany amin'ny alehanao mankany an-tampon'ny tranobe. Azonao atao ny mandresy ny vato misakana rehetra mitranga. Ilaina tokoa ny sary amin'ny lalao, fa mahafinaritra amin'ny namana iray izany. Ireo mpampiasa dia afaka manana fotoana mahatsiravina rehefa manandrana mahatratra ny efitrano 705.
Mila mandeha manodidina ny sari-tany ianao ary manandrana mankany amin'ny rihana fahafito miaraka amin'ny vadinao. Tsy tokony hiatrika olana ianao. Somary miadana ny filalaovana ary haka ny fotoananao.Azonao atao ny manana ny traikefa tsara indrindra amin'ny resadresaka feo Discord eo am-pilalaovana.
Ny fampidirana hetsika, traikefa nahafinaritra, mpitsongo olona voalohany, ary horohoro ara-psikolojika dia niraikitra tamin'ny tantara maizina sy mavesatra.
Samy hafa be izy io amin'ny tontolo iainany. Ity lalao ity dia mamadika ny seho sy ny toerana misy azy haingana kokoa noho izay eritreretin'ny mpilalao.
3. Ny Elevator mampihoron-koditra
Lalao mampihoron-koditra novolavolain'i zMadZeus. Mijanona eo amin'ny gorodona tsy ampoizina ny ascenseur, ary isaky ny gorodona dia misy scenario mampihorohoro hafa. Ny mpamono vaovao dia ampiana tsindraindray amin'ny lalao ankehitriny, izay mitazona azy io hirotsaka hatrany. Ny mpamorona ny Horror Elevator dia manana lalao hafa hafa koa.
Izy ireo dia mety amin'ny lalao izay te hijery ireo lafiny samihafa amin'ny lalao Horohoro. Manoro hevitra anao izahay hanandrana an'ity lohateny mahafinaritra ity. Ny lalao dia mahafinaritra be amin'ny olona tsy an-kanavaka amin'ny Internet.
Misy rihana 24, ary mihombo ny haavon'ny fahasahiranana rehefa mandroso amin'ny base random manaraka ny mpilalao.
Afaka mandray mpilalao hatramin'ny 10 indray mandeha ny mpizara.
4. Ny fitaratra
Lalao mampihorohoro ara-tsaina ataon'ny mpilalao tokana novolavolain'i Egroce. Natao hanahaka ny fiheverana hafahafa-tarehy-amin'ny-fitaratra. Lalao mahafinaritra ity izay mandray tropika Obby mahazatra ary mampivadika azy ireo isaky ny mandeha. Ny fitaratra dia miditra amin'ny mety hisian'ny lalao mampihoron-koditra ao Roblox.
Manomboka ny fahafinaretana rehefa manamaizina ny jiro ao amin'ny efitrano ianao. Hanomboka handre feo ianao ary hahita sary manelingelina. Manome fampitandremana ho an'ny ankizy ny fifaninanana alohan'ny hidirany amin'ny lalao.
Mampiseho tsara ny fisehoan'ny fisaintsainana. Ny mpilalao dia mila mivezivezy amin'ny làlan-kizorana mamitaka, mifototra tanteraka amin'ny fiheverana izay mitarika fanamby vaovao tsy maintsy resena.
Ny script lalao farany dia misy tsipika kaody 1000+, izay fanitarana ny script fototra. Izy io dia mamaritra ny fomba ahafahan'ny mpilalao manafina na mampiseho faritra miafina eo amin'ny lafiny fitaratra ary hanodinkodina ireo fananana ampahany.
5. Irery ao amin'ny trano maizina
Lalao mampihoron-koditra mampihoron-koditra ity, izay ataon'ny mpanao famotorana manokana any amin'ny tanàna kely iray hanadihadiana famonoana olona mahery setra ary mahita tsiambaratelo momba ny fianakaviana iray. Irery ao amin'ny trano maizina no tena fifanarahana raha ny amin'ny lalao mampatahotra Roblox.
Lalao vao haingana izy io, ary afaka mahita sary mahatsikaiky ianao. Malaza be eo amin'ny fiaraha-monina io. Afaka mankafy tombontsoa an-taonina maro ianao aorian'ny fandalinana ilay tantara. Mahaliana izany.
Mampihomehy ity lalao ity satria ahafahan'ny mpilalao 20 milalao indray mandeha, ary tsy irery ianao.
Ny mpilalao iray dia afaka mahazo marika famantarana isan-karazany arakaraka ny fahasarotan'ny asany, ny Grandmaster malaza indrindra.
6. Mine mine nofy ratsy
Mampiseho trano fitrandrahana harena an-kibon'ny tany izay notafihan'ny zombie izay mpitrandraka taloha nefa nivadika ho zavaboary ireo, ary te hihinana ny atidohanao. Ny sisa ataonao dia ny manakana azy ireo tsy hiparitaka ary hahita làlana handosirana ity toerana ity miaraka amin'ny sainao tsy mitongilana.
Ny lalao mitrandraka Nightmare dia tsy mitovy amin'ny lalao mampatahotra Roblox hafa eto amin'ity lisitra ity. Mahasoa izany ho an'ireo izay maniry hetsika bebe kokoa amin'ny lalao mahatsiravina. Afaka manandrana ny tanànan'ny mpitrandraka ao Robloxia ianao anio. Mpilalao 9 farafaharatsiny afaka miara-mankafy ny lalao.
Izy io dia lalao multiplayer izay ahitan'ny mpilalao iray mpilalao valo hafa ao amin'ny toeram-pitrandrahana iray.
Manery ny elanelana misy eo amin'i Roblox sy Minecraft izy amin'ny alàlan'ny fametrahana hetsika mampientanentana amin'ny lalao fitrandrahana harena ankibon'ny tany lehibe sy mampatahotra indrindra. Samy manome tany lonaka ho an'ny eritreritr'ireo mpilalao manidina ambony amin'ny sary ifotony izy ireo fa tsy lalao AAA manaitra.
Ady ady zombie Roblox novolavolain'ny Beacon Studio, natomboka tamin'ny desambra 2013. Mila miaina hatramin'ny farany ny mpilalao iray amin'ny fampiasana ny fitaovam-piadiany nefa tsy tratran'ny Zombies. Ny mpilalao iray dia afaka mahazo EXP bebe kokoa amin'ny alàlan'ny fitifirana ny zombies any an-doha satria manome fahavoazana bebe kokoa.
Zombie Rush dia lalao tokana, mampatahotra Roblox. Mahazo basy ianao hitifirana ireo zombie, ary tena mahafinaritra amin'ny namana izany. Hanafika anao ny zombies. Ho very ny fahasalamany ny Gamers raha tsy mitandrina izy ireo.
Izy io dia misy rafi-pamolavolana ary koa mirakitra ny isan'ny famonoana azo.
Manome kalitao miavaka amin'ny famohana fitaovam-piadiana mifototra amin'ny isan'ny famonoana olona miaraka amin'ny fanavaozana ny haavony.
8. Talohan'ny maraina
Ny lalao mampihoron-koditra amin'ny atmosfera dia manana fangaro, feony ary kilalao mifangaro tanteraka izay mitambatra hamoronana traikefa Roblox tokana. Ny lalao mampatahotra Roblox izao dia manana tohiny. Ny sary dia tsara kokoa sy mahafinaritra kokoa. Tena mahafinaritra ho an'ireo izay maniry ny filalaovana irery.
Azonao atao koa ny milalao an'ity tantara mampatahotra ity miaraka amin'ny olona 8. Ny traikefa amin'ny feo lalina dia mampatahotra kokoa ny lalao.Ny kinova vaovao dia famoahana vao tsy ela akory izay. Afaka manantena spook be dia be ianao alohan'ny maraina.
Mampiasa sombin-javatra manokana izy io mba hamoronana tontolo milentika, toy ny zavona manarona manarona ny gorodon'ny sarintany, mifampitohitohy anaty sarintany misy lanezy, mifangaro ny zana-kazo miaraka amin'ny jiro mba ho sarotra kokoa ho an'ny mpilalao ny mahita lavitra amin'ny alina.
Izy io dia lalao multiplayer izay ahafahan'ny mpilalao milalao na velona (velona mandra-maraina), mahery fo, na mpikomy.
Iray amin'ireo lalao Roblox multiplayer mampatahotra indrindra amin'izao fotoana izao eo amin'ny dingana alpha izay isan'ny mpilalao 10, ny iray amin'izy ireo dia voafantina ho bera, ary ny ambiny kosa dia sisa velona. Mila mamono ny sisa velona rehetra i Bear ao anatin'ny 5 minitra. Ilaina tokoa ny lalao raha ny amin'ny famolavolana.
Mahafinaritra rehefa manampy fitaovam-piadiana amin'ny fandaharam-potoana ianao. Misy safidy maro ho anao hijerena ilay tranonkala. Mahazo fanavaozana vaovao tsy tapaka ny lalao. Azonao atao ny manantena hahita sarintany vaovao an-taonina isam-bolana.
Ny tontolo maizimaizina, miaraka amin'ny lantom-peony eo afovoan'ny feon-kira mampatahotra, dia mahatonga ity lalao ity hikorontana marina tokoa.
Raha ampitahaina amin'ireo tafavoaka velona dia manana tombony maro ny hetsika.
10. Mistery mamono olona 2
Lalao mampihoron-koditra noforonin'i Nikilis io. Ny mpilalao iray dia mety tsy manan-tsiny, Sheriff, na mpamono olona.Mihazakazaka sy miafina amin'ny mpamono olona ireo tsy manan-tsiny ary mampiasa ny fahaizany mpitsikilo hampiharihariana ilay mpamono olona. Sheriff dia manampy ny tsy manan-tsiny amin'ny alàlan'ny fanonganana ilay mpamono olona satria manana fitaovam-piadiana izy.
Ny mpamono olona dia manala ny olon-drehetra ary miaro tena amin'ny tifitra sheriff. Ny lalao mistery momba ny famonoana olona dia misy sarintany samy hafa. Azonao atao amin'ny toerana tsy manam-paharoa ianao rehefa mamaha ilay mistery. Nomena ny mpampiasa ny andraikitra raha vantany vao manomboka ny fialamboly.
Ny mpizara dia afaka mandray mpilalao 12 miaraka amina mpamono olona iray, sheriff iray ary folo tsy manan-tsiny farafaharatsiny.
Ahitana fomba telo: mahazatra, Hardcore, ary Assassin. Ireo maody ireo dia azo avadika amin'ny fotoana ilain'ny mpilalao.
Sehatra ho avy amin'ny lalao Roblox Mampatahotra:
Miaraka amin'ny lazan'ny lalao izay mitombo hatrany, Roblox dia miasa mafy isan'andro isan'andro mba hahazoana antoka fa manome ny traikefa filokana tsara indrindra ho an'ny vondrom-piarahamoniny izy. Tsy mamela vato tsy voahodina i Roblox ary mamely ny lohan'ny hoho foana rehefa manome fanovana kalitao amin'ny alàlan'ny fanavaozana satria ny mpilalao no tena tiany. Roblox dia miara-miasa amin'ny Microsoft Playfab, izay ho lasa backend platform feno.
Roblox dia mitantana ny programa Star Creator izay mampiroborobo ny lalao an-tserasera amin'ny alàlan'ny fanomezana kaody mpamorona ny Youtubers hizara amin'ny mpihaino azy. Rehefa mividy Roblox ny mpilalao amin'ny alàlan'ny kaodiny, ny ampahany amin'ny tombony dia zaraina amin'ireo Youtubers izay ampiasaina ny kaody. Azo antoka, Roblox dia handray ny vondrom-piarahamonina filokana iraisam-pirenena amin'ny dingana manaraka amin'ny ho avy.
Ny lalao mampatahotra Roblox dia fomba tsara hifehezana tanteraka ireo sarintany. Afaka mahazo spooks be dia be ianao ary mankafy ny lohahevitra miaraka amin'ny namanao. Misy lalao mampatahotra taonina eto amin'ity lisitra ity. Manantena izahay fa manana traikefa tsara ianao amin'ny fankafizanao azy ireo amin'ny fitaovanao.
Hevitra Template an'ny Akanjo Roblox
Apple AirPods Pro vs AirPods 2 - Inona ny fahasamihafana?
Lalao Twitch Prime Free - Desambra 2020
ny fomba fampiasana chromecast miaraka amin'ny solosaina finday
ny fomba famonoana ny maody azo antoka
mijery sarimihetsika an-tserasera maimaim-poana nefa tsy misintona na mandoa na misoratra anarana
tranokala tsara indrindra hijerena fandaharana amin'ny fahitalavitra
mandefasa sarimihetsika an-tserasera maimaim-poana tsy misy fampidinana
mijery momba ny fotoana online putlocker